Pinterest uye WordPress
Uchishandisa Pinterest Kubatanidza Vashandisi uye Kuwedzera SEO
Chipiri, Kurume 27, 2012 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Austin Gunter
Pinterest chave chinhu chitsva chikuru chinhu mumasocial network. Pinterest, uye vamwe, seGoogle + neFacebook, vanokura base mushandisi nekukurumidza kupfuura izvo vashandisi vanogona chaizvo kudzidza kushandisa sevhisi, asi hombe mushandisi base zvinoreva kuti kufuratira sevhisi upenzi. Ndiwo mukana wekukura mhando yako. Tiri kushandisa Pinterest paWP Injini, saka ndinenge ndichitora pane yedu mhando mune iyo positi semuenzaniso unobatsira.
Pakutanga, tech brand inoshandisa Pinterest inogona kusanzwisisika… Sezvo isu tisingagadzi madhirezi emuchato, uye isu tisingatenge mabikiro, nei tiri kushandisa Pinterest? Tiri kuishandisa nekuti Pinterest ine inoshamisa mukana wekusimudzira SEO, uye kukura yepamhepo tech yekutanga zita, uye vashambadzi vepamhepo vachada kuishandisa iyo yekubatanidza kuvaka.
Pinterest ipfungwa yakajeka, yakaurayiwa zvine mutsindo.
Pins mifananidzo yaunowedzera kuPinterest, yakabatana kubva kune imwe nzvimbo pawebhu, kana kurodha pasi kubva pakombuta yako. Pini ine backlink kune yekutanga zvinyorwa. Iwe unogona kunyora mifananidzo uye ipapo chero munhu anogona kutaura pane peji. Chero peji rine chifananidzo rinogona kupinhwa.
Bhodhi ndiwo chaiwo mabhodhi ekokoreti uko vashandisi uye zvigadzirwa vanogona kuisa mapini. Mabhodhi anogona kurongwa nechikamu, se "Delicious Barbecue," uye "Killer Twitter Avatars," kana "Infographics."
Kudzokorora ndizvo chaizvo zvinonzwika senge. Chero pini inogona "kudzoreredzwa" pabhodhi idzva kuti mumwe munhu atevere. Apa ndipo panopinda Pinterest. Kana vashandisi vakatanga kupota-chinja zvine mutsindo, saka zvemukati, uye zita rako, zvinopararira kunetiweki, zvichigadzira backlink nyowani nguva imwe neimwe.
Pinterest inotyisa, nekuti Chero peji peji rezvinyorwa rine mufananidzo, rinogona kugoverwa pane pabhodhi, uye izvo zvinoita kuti zvive nyore chaizvo kuunganidza zvakawanda zvemukati munzvimbo imwechete. Izvo zvakakosha kuti ufunge pamusoro pemifananidzo yemakeke emuchato. Iwe unogona kugovana blog zvinyorwa, misoro yeWordPress, yako musangano re-cap, kusanganisira mifananidzo yehurukuro yawakapa.
Nguva imwe neimwe mushandisi paanobatazve zvemukati zvako, iwe unowana imwe backlink.
Saka iwe unoshanda sei kune zvekare-mapini? Iwe unoita fungidziro nezve izvo zvirimo, zvigadzirwa, masevhisi, uye varaidzo izvo vashandisi vako vanofarira, wobva watanga kuibaya. Zvinogona kutora nguva kuwana zvakakwana mushandisi kubatanidzwa, asi kana iwe uine zvakanaka zvemukati, ingori nyaya yenguva.
Nzwisisa vatengi vako
PaWP Injini, vatengi vazhinji vezvino vashandisi veWordPress. Ivo vane hunyanzvi hwehunyanzvi, uye vanotsvaga zvemukati zvinogona kuvaita varapi vepamusoro uye dhizaini vanogadzira varinani uye vanopa mazano. Iwe uchazoda kuratidza yako mutengi persona, uye wozonyora zvemukati zvinoenderana nezvavanoda.
Semuenzaniso heano mamwe emapinibhodhi atiri kutanga nawo, uye zvikonzero zveumwe neumwe wavo.
Kuona musango: Mushandisi-akaendesa mafoto akapfeka akapihwa t-shirts. Iwe unogona kukumbira iyi mifananidzo chero nguva iyo kambani yako painopa yakashambadzirwa swag.
WordPress Zvitsva: Nhasi yanhasi inova ninja ramangwana… tinotenda mukusimudzira tarenda nehunyanzvi… Hazvigoneke kuti ndiani angangotanga yavo kambani mune ramangwana.
Dzakanakisa Themes: Themes chikamu chechokwadi chinozviisa pasi, asi ini ndinoshanda nesimba kuwedzera madingindira anogadzirisa matambudziko anonakidza nenzira dzakanaka, kana zvakagadzirwa zvinoshamisa.
Kodhi Snippets FTW: Muenzaniso wakanaka wekutumira zvemukati zvemukati paPinterest. Chero bedzi paine pikicha pane peji, ini ndinogona kutumira kodhi snippets kana saiti kuvandudza.
Tech Rutsigiro ndeyeKutengesa: Yedu yekambani tsika inoisa pamberi rutsigiro pamusoro pekutengesa, uye isu tinoisa izvi mukushambadzira kwedu. Mucherechedzo wako unenge uine kukosha kwakakosha kunoita kuti ive yakasarudzika, uye iwe unogona kuiisa pano.
Yedu Akakomberedzwa Mapulagi: Runyorwa runyorwa rwema plugins atakaedza uye tinokurudzira vashanduri veWordPress vashandise.
Mhinduro yevatengi: Yese mhando inofanirwa kuratidza chaiyo vatengi mhinduro paruzhinji. Pinterest inzvimbo huru kuve pachena pamusoro pesimba uye kushaya simba.
Kana iwe uri kupinha zvine chekuita nazvo, Pinterest inogona kureva matani e backlinks ezako zvemukati. Paunofunga nezve ako akakodzera vatengi, fungidzira izvo zvavanonyanya kunetsekana nazvo, izvo zvavanokoshesa nekuregeredza, ita rondedzero yezvinhu izvo, uye tanga kuzvipinira. Shandisa ako aripo enhau enhau kuti uwane huwandu hwakakosha paPinterest, uye usakanganwe kupinha zvemukati zvevashandisi vako futi.
Ini ndinoshanda kuWP Injini seMumiriri weBrand mukati meiyo WordPress (Capital "P") nharaunda. Ini ndinoblogi uye ndinoita kubatana munharaunda yeWordPress.
WP Injini inopa kutsanya WordPress kuitisa kune vanogadzira kuti vagadzire anoshamisa mawebhusaiti evatengi vavo.
Ini ndashandisa pinterest kugadzirisa yangu saiti uye mhedzisiro yacho yaishamisa saiti yangu yakasvetwa kubva ku # 234 kuenda ku # 9 mumavhiki mashoma nguva.
Ini ndinoita yakapusa chinhu kuti outsource iyo pa fiverr uye ndikaisa yangu saiti yakanamirwa nevanhu vanopfuura makumi manomwe, handizive kuti akazviita sei achingotsvaga nekunyora pinterest pa fiverr uye iwe uchaiwana.
Sezvo ini ndichiziva parizvino pinterest yakanakira SEO nezvikonzero izvi:
1. Kamwe webhusaiti yedu payakapetwa ine 3 backlinks kuverenga
2.Google inofarira pasocial media signal kuti irege kumakwa semasangano epurazi
3. Parizvino pinterest zvinongedzo zvakateedzera kunyangwe iwo mufananidzo
4. Uyezve tsigira anchor zvinyorwa, zvakakwana kuisa mazwi edu
Anotyisa post! Kubatsira chaizvo. Ndatenda zvikuru nekugovana 🙂
Ndiri kuyedza kuifarira… asi ndiri kuona zero kukosha mairi. Ndanga ndichi pinning uye ndichiita uye ndiri kuwana zvishoma… zvirinani zvakadaro, hapana traffic kubva kwazviri. Ndinoziva kuti ine mukana, asi ini handingoiona. Dzese idzi "dzebudiriro" nyaya dzakanaka, asi kudzamara ini ndoga ndawana nyaya yekubudirira nebasa, handikwanise kupedza nguva yakawanda ipapo.
Izvo zvakare kusarongeka kwevashandisi kuenzanisa aya masevhisi (Pinterest neGoogle + semuenzaniso) neFacebook. Facebook ine vanopfuura mamirioni makumi masere nevashandisi. Hazvina musoro. Ndinoziva vanhu vashoma kwazvo vanoshandisa Google+ nezvenyaya iyi. Iyo ine nezve yakanyanya kukosha sePinterest.
Kwakanaka. Zvinonakidza kupinza zvimwe zvinhu uye zvakandipa mashoma mazano. Asi Pinterest HASI mutambo wekuchinja.
Chinyorwa chakanaka hazvo. Inoratidza iwe unoziva kushandisa Pinterest.
Ini ndichave mupomhanyi pane izvi kana zvasvika kune chirevo chimwe chete… ndichienzanisa pakati pazvo neFacebook. Mune maonero angu, huwandu hwevashandisi hahune basa nekushambadzira kwedu. Pane kupokana, ndiri kukwezva mamwe traffic paPinterest pane neFacebook!
Jul 5, 2012 na10: 18 PM
austin pane yakanaka pinterst plugin?